Kungani izibani eziholelekile zimnyama futhi zimnyama?
Wonke umuntu unokuhlangenwe nakho okunjalo kokuphila Isibani se-LED esisanda kuthengwa sihlala sikhanya kakhulu, Kepha ngemuva kwesikhathi esithile, izibani eziningi ziba mnyama futhi zibe mnyama, Kungani isibani se-LED sinenqubo enjalo? Ake sikuyise ezansi namuhla! Thola ukuthi kungani izibani zakho ze-LED sezifiphala Kumele ...
Ukuhlelwa kwe-Smart Lighting, Innovation Sustainable
IFrankfurt Lighting Fair ngokungangabazeki ingesinye sezigaba ezihamba phambili zezinkampani zokukhanyisa. Ukukhanyisa kuka-Anan kukhombisa ubuhle bomkhiqizo waseChina kuwo wonke umhlaba becabanga ukuthi le ngxenyekazi enethonya elikhulu. Kusukela ekuhlaselweni okuqinile kokukhanyisa kwendabuko, kuya emisha esheshayo yokukhanyisa kwe-LED, kuze kube manje ...
Ukuxhaswa kwesidingo kanye nenqubomgomo, amathemba okukhanyisa izitshalo angalindelwa
Kuqhutshwa ukusweleka kokudla nezidakamizwa okubangelwa ubhadane lomhlaba wonke, noma ngabe yimakethe yaseNyakatho Melika yokulima izitshalo zezokwelapha, noma imakethe yaseYurophu yokulima ifektri yezitshalo zasendlini njengemifino, amakhabe nezithelo, kanye nokwanda. ..